Ihhovisi stuffy, uthuli emgwaqweni, emoyeni, omisiwe air conditioning bafudumale, kampompi ukuxova umuthi wokugoma Emanzini kampompi - konke lokhu has nomthelela omubi isikhumba sethu. Kuba ibala zomile, ukuvuvukala avele imibimbi ekuseni. Kuyasiza ukuthuthukisa isigxingi ngamanzi ezishisayo. Leli yithuluzi kunalokho omusha ngokubaluleka kuthandwa. Iningi abesifazane bayakwazisa izakhiwo ezuzisayo kwalo mkhiqizo yezimonyo.
amanzi Thermal - ke uye ephulukisa izakhiwo lamanzi esiphethu. Imithombo ezishisayo emanzini cishe ikhilomitha ukujula, cishe ekuqedeni ingress kuwo kwamakhemikhali ahlukahlukene kanye nemfucumfucu.
Isakhiwo abaningi abakhathalelayo futhi izimonyo engena emanzini iziphethu ezishisayo, kodwa lungasetshenziswa ngokuzimela. Ngenxa ukwakheka zemvelo eziyingqayizivele - calcium, okusansimbi, i -iodine, i-potassium, i-sodium, magnesium, manganese - amanzi ezishisayo ngempumelelo kunciphisa izinga nomswakama ngesivinini umzimba amaselula kanye ematisa isikhumba namaminerali abalulekile.
amanzi Thermal - ithuluzi ukuthi kufanelekile bonke izinhlobo zesikhumba. lawa manzi uyakubuye insindiso yangempela ngoba isikhumba ebucayi. It iqeda ukucasulwa ubala futhi ububomvu, kuthuthukisa umzimba amaselula, futhi normalizes esivikelo umsebenzi kwesikhumba.
In the line izinkampani eziningi yezimonyo ukwethula amanzi ezishisayo ngokuba ubuso. Intengo kwalo mkhiqizo impela high, kodwa umphumela ufaneleke zonke izindleko.
Ukusetshenziswa kwamanzi ezishisayo
Emanzini kampompi has nomthelela omubi isikhumba: Kwangathi kubangele ukoma futhi ukuluma.
Ukusetshenziswa kwamanzi ezishisayo emva ukuwasha kuzosiza ukuqeda isikhumba ukucasuka, niyilungise sokusebenzisa izimonyo.
Emini, isikhumba ilahlekelwa eziningi umswakama futhi eqala ukubonakala buthuntu. Futha ebusweni a Splashes ezimbalwa amanzi ezishisayo, ungayibuyisela isikhumba ithoni kanye kukhanya okunempilo. Makeup akasoze oniwa, futhi ngeke nje kube fresh.
Ukusebenzisa isikhumba yamanzi ezishisayo ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu ebusuku ezophucula ekunciphiseni ejenti senzo.
amanzi Thermal kungaba ingxenye buso zemvelo. Kungenziwa buhlanjululwe ngamanzi ubumba yezimonyo - nokubuyisela imaski ngomumo.
Ngemva usebenzisa khuhla noma exfoliating amanzi ezishisayo kuzovimbela ukucasulwa ubala futhi bazogcwalisa isikhumba microelements ewusizo.
Ukusetshenziswa kwamanzi ezishisayo kanye aroma- noma thalassotherapy ukuthuthukisa umphumela inqubo.
Ukuze enze konke amanzi okuhloswe umsebenzi ezishisayo, udinga uyithenga ezitolo ezikhethekile noma Pharmacy. Kuyadingeka ukuba makudle imikhiqizo brand owaziwa, ukukhetha okuhle kungase kube amanzi ezishisayo "La Roche".
Amanzi avela emithonjeni engu-ezishisayo hypoallergenic ngokuphelele futhi ephephile okumele asetshenziswe abantu abadala kuphela kodwa futhi izingane. Kuhlanganisa kungekho parabens, amakha kanye izimonyo. ukusetshenziswa njalo lokhu amanzi ibuyisela ibala enempilo, ukwenza isikhumba zazivuma kakhudlwana futhi ochichima injabulo. amanzi Thermal - umthombo engokwemvelo impilo nobuhle isikhumba sakho.
Lokuzaliswa Honeysuckle cuttings nokuhlukana ehlathini